Wenger oo ka doonaya tababare Deschamps inuu nasiyo Koscielny kulanka Ivory Coast – Gool FM
Wenger oo ka doonaya tababare Deschamps inuu nasiyo Koscielny kulanka Ivory Coast
Liibaan Fantastic November 11, 2016
(London) 11 Nov 2016 Tababaraha kooxda Arsenal ayaa bilaabay durbadiiba inuu ka hortago in ciyaartoydiisa ay ku dhaawacmaan kulamada xulalka ee isbuucaan.
Wenger ayaa fariin muuqata u diray xulka qaranka France wuxuuna uga digay in Laurent Koscielny la ciyaarsiiyo kulanka saaxiibtinimo ee xulku uu wajihi doono Ivory Coast talaadada.
Alexis Sanchez ayaa shaki lagaliyay inuu taam u noqon karo kulanka Manchester United kadib dhaawac ka soo gaaray tababarka xulkiisa Chile, Wenger ayaana dalbaday in laacibku uu dib ugu soo laabto London.
“France waxay kulan saaxiibtinimo laciyaari doonaan xulka Ivory Coast habeenka talaadada, ma awoodo inaan arko Laurent Koscielny oo ciyaaraya kulankaas” ayuu yiri tababaraha Arsenal.
“Sifiican ayaan u fahansanahay waxa ay uga dhigantahay inuu ciyaaro kulanka Sweden, waase wax ka duwan in la fahmo inuu ciyaaro kulanka labaad ee Ivory Coast, waayo kadib waxaan laciyaari doonaa Manchester United kadibna PSG”.
DEG DEG: Kooxda Banaadir oo hanatay Super Cup-ka Somalia